द्वितीय विश्व युद्ध मा दल warring प्रयोग सबै प्रविधी बीचमा, विशेष चासो प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया को सिद्धान्त को प्रयोगमा आधारित थियो प्रभाव जो ती लडाई एकाइहरु थिए।
यो सिद्धान्त पहिलो प्राचीन समयमा experimentally अध्ययन गरिएको थियो। जाहिर छ, Geron Aleksandriysky पहिलो शोधकर्ता भयो। यसलाई मसीही युग अघि एक सय र बीस वर्ष, उहाँले पहिलो जेट कल सिर्जना गर्ने ज्ञात छ। 90 ° कोण मा बाङ्गो गरिएको छ जो एक खोक्रो पार्श्व "spikes" एउटा खोक्रो बल प्रतिनिधित्व छ। भित्र बल खुवाउनुभयो बाफ। जब पक्ष ट्यूब मार्फत ( "प्रक्रियाहरू") जोडी बाहिर जाने, घुमाउन गर्न बेलुन शुरुवात। तर, त्यो समय व्यावहारिक आवेदन मा स्थापित भएको बकुल्लो ड्राइभिङ शक्ति को तथ्यलाई फेला थिएन।
10 औं शताब्दीमा देखि रकेट उडान मिति लागि अगाडि प्रतिक्रिया को प्रयोग मा पहिलो जानकारी। तर, यो बारेमा थप विश्वसनीय प्रमाण मानिन्छ मिसाइल प्रक्षेपण गर्ने 13 शताब्दीमा चीन मा Mongol आक्रमण समयमा।
प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रयोग विचार चाँडै युरोप मा penetrated। तर, त्यो विकास भएन। एक ठूलो हदसम्म यो कारणले 14 औं शताब्दीमा सिर्जना गरिएको थियो handguns (बन्दूक), साबित जो चिनियाँ मिसाइलहरु भन्दा बढी प्रभावकारी हुन भन्ने तथ्यलाई थियो।
रकेट व्यापार रूस मा रुचि। 1680 मा यो मास्को मा मिसाइलहरु को उत्पादन को लागि पहिलो कार्यशाला स्थापित। यसको काम मा सक्रिय भाग लिए पछि पत्रुस आई
को मिसाइल मामला छानबीन थियो र जेट नोदन विकास संग समानान्तर मा। यो क्षेत्र फिर्ता 17 औं सताब्दी गर्न मिति केही विकासक्रम बारे जानकारी। जेट प्रणोदन सक्रिय वैज्ञानिक तथ्याङ्कले अध्ययन। यसलाई गति को संरक्षण को व्यवस्था द्वारा वर्णन गरिएको छ। प्रतिक्रियाशील आन्दोलन - केही गति संग को भाग को जुदाई कारण शरीर को यो आन्दोलन। न्यूटन, Huygens, Bernoulli, Zhukovsky र अरूको यस क्षेत्रमा काम बच गर्न।
रूस मा, पहिलो पटक लागि 19 औं शताब्दीको अन्त द्वारा त्यहाँ विमान निर्माण मा जेट प्रणोदन प्रयोग गर्न एउटा विचार छ। यो विचार को परियोजना 1881 मा प्रसिद्ध Narodnaya Volya Kibalchich द्वारा सिर्जना गरिएको थियो। आफ्नो लेखोटहरू पछि, Tsiolkovsky interplanetary संचार गर्न जेट प्रणोदन प्रयोग गर्न 1903 मा प्रस्ताव, परियोजना विकास गरे। यो वैज्ञानिक क्षेत्र थप विकास गोडार्ड, Oberth, Lorena लेखोटहरूमा पाए। आफ्नो प्रयोग यी र अन्य कार्यकर्ता प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया, गर्न advantageously लागू प्रयोग विभिन्न embodiments खोज्नुभयो जेट इन्जिन।
तर यो 20 औं शताब्दीको पहिलो दशक को संकलित सैद्धान्तिक सामाग्री पहिलो विश्व युद्ध को समयमा व्यवहार मा यो लागू गर्न पर्याप्त थिएन कि उल्लेख गर्नुपर्छ। जबकि जेट नोदन सिद्धान्त प्रकाश र मुख्यतया प्रयोग भएको थियो चमक।
पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध बीच अवधि, जेट विमान को विकास मा सक्रिय र तीव्र काम सञ्चालन फरक। यो काम को परिणाम स्वरूप, नयाँ हतियार व्यापक रूप लड समयमा प्रयोग भएको थियो।
विमान संरचना र तोप हतियार एक प्रतिक्रियाशील प्रकार रूपमा मोटर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया: आज जेट प्रविधी मुख्य रूप सैन्य महत्त्व र दुई मुख्य दिशामा विकसित छ। यो व्यापक र संकेत र प्रकाश भने उपकरण को एक प्रकार हो।
साथै, प्रकृति मा एक प्रतिक्रियाशील आन्दोलन छ। यसरी, उदाहरणको लागि, व्यंग्य, अक्टोपस, jellyfish, कारण discharged पानी जेट गर्न कट्टलफिस विस्थापन विशेषता। को तरकारी संसारमा पनि जेट नोदन सिद्धान्त अवलोकन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, एक बोट मूल दक्षिणी राज्य गर्न "ककडी squirting।" एक ककडी जस्तो जो पाकेको फल, उज्यालो स्पर्श बाट, यो बाला बन्द बाउन्स। यसरी फल देखि तरल बीउ संग प्वाल मार्फत गुजर। "ककडी" विपरीत दिशा मा उडान छ। यो प्रति सेकेन्डमा दस मीटर को उत्सर्जित तरल र फल को गति बाह्र मिटरसम्मको बन्द उड्न सक्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
को परिक्रामी हालतमा को संरचना र संरचना
जीवाणुतत्व - यो केही विज्ञान छ? चिकित्सा जीवाणुतत्व
कानुनी विनियमन को विषय र सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यसको भूमिका
तथ्याङ्क - यो हुनुहुन्छ? , सामाजिक आर्थिक र कानुनी तथ्याङ्क
मोटर प्रजातिहरू संग ग्लाइडरहरू
दैनिक शुल्क। हरेक दिन काम
Tiergarten मा खसेको सोभियत सैनिक गर्न स्मारक (फोटो)
माछा casserole। म यसलाई तयारी गर्नुपर्छ?
विश्लेषणात्मक कौशल कसरी विकास गर्न: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
खाडी रीगा: वर्णन, स्थान, स्पा
कस्तो खोकी भैरह्यो भने: खोकी लागि प्रभावकारी उपाय। औषधि र परम्परागत व्यञ्जनहरु
एक आत्म-कार्यरत नागरिक: गतिविधि, प्याटेन्ट